Posted By: mygate wayon: November 28, 2019 In: Announcement, Breaking News, News
President U Win Myint visited the National Library (Yangon) located on Merchant Street in Pabedan Township to inspect renovation works there. During the visit, the President was accom...	Read more
Posted By: mygate wayon: November 08, 2019 In: Breaking News, News, State and Division News
Posted By: mygate wayon: July 26, 2019 In: Breaking News, News
ရန်ကုန်၊ဇူလိုင် ၂၅ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ချို့အား ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အလှူခံခိုင်းမှုမျိုးကိုပါတီမှ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထားခြင်းမ...	Read more
Posted By: mygate wayon: July 26, 2019 In: Breaking News, News, State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၆ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်...	Read more
Posted By: mygate wayon: July 03, 2019 In: Breaking News, News, State and Division News
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ ခြုပျပါတီ၏ ပထမအကွိမျ နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ အမြိုးသမီးလုပျငနျးကျောမတီမြား စုံညီတှဆေုံ့ပှဲကို ယနေ့ နှံနကျတှငျ နပွေညျတျော၌ ကငျြးပ ပါသညျ။	Read more
Posted By: mygate wayon: June 18, 2019 In: Breaking News, News, State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News
နေပြည်တော် ဇွန် ၁၈ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ်ချန်အိုချာ(ငြိမ်း) ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ...	Read more
Posted By: mygate wayon: June 06, 2019 In: Breaking News, Chairperson, News
In his opening address, the President said the World Environment Day, on5June 2019 is the most important day for highlighting environmental conservation around the world. This year’...	Read more
Posted By: mygate wayon: May 28, 2019 In: Breaking News, News
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ခကျြသမ်မတနိုငျငံသို့ သှားရောကျမညျ နပွေညျတျော မေ ၂၇ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ...	Read more